Radio Don Bosco - Nandeha teny ambony rano Izy
Nandeha teny ambony rano Izy
Naseho ny : 6 janoary 2021
Alarobia 6 janoary 2021 — Herinandro manaraka ny Epifania — Hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo no anirahan’Andriamanitra Ahy, sy hankahery ny torotoro fo — Evanjely Masina nosorata'i Masindahy Marka 6, 45-52
Rehefa avy nampitombo ny mofo sy ny hazandrano mba hamokisana ny vahoaka i Jesoa dia fahagagana hafa indray no hitan’ireto mpianany teny Aminy. Talanjona sy gaga ireto mpianatra rehefa nahita an’i Jesoa nandeha teo ambony ranomasina. Ho an’ny Jody mantsy, ny ranomasina dia manambara ny herin’ny ratsy. Ary mazava ho azy, ny herin’Izy Andriamanitra irery ihany no afaka mandresy an’izany. Toa adinon’ireto mpianany fa i Jesoa izay arahin’izy ireo ity anie ka zanak’Andriamanitra, nefa mbola noheverin’izy ireo fa matoatoa ihany rehefa nandeha teo ambonin’ny ranomasina. Azo lazaina araka izany fa tsy ampy ny fahalalan’izy ireo sy ny finoany an’i Jesoa. Nefa izy ireo dia niara-niaina isan’andro sy nanaraka an’i Jesoa hatraiza hatraiza.
Manomboka nanambara ny tenany i Jesoa eto amin’ity Evanjely ity. Fanambarany ny fandreseny ny ratsy, dia ny fahafatesana izany. Manasa antsika àry, i Jesoa, mba hatoky Azy sy tsy hatahotra rehefa tojo fahasarotana eo amin’ny fiainana satria Izy tokoa no "efa Mpandresy an’izao tontolo izao" tamin’ny fitsanganany ho velona. Ankino aminy àry ny ahiahintsika sy ny tebitebintsika ary ireo fahoriantsika eto amin’ity fiainana ity, fa Izy no hanamaivana izany.
Ny fiarahantsika amin’i Jesoa isan’andro ao anatin’ny Eokaristia sy ny vavaka àry no antoky ny fahombiazantsika. Ao no hahafatarantsika ny tena maha Izy azy dia hoe zanak’Andriamanitra Mpandresy ny ratsy Izy. Matokisa àry an’Izy Jesoa zanak’Andriamanitra ary aza matahotra ny manara-dia Azy.